माओवादी केन्द्रको अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय समितिको विदेश बिभागस्थित संगठनहरुको पुनर्गठन, कस–कसले पाए जिम्मेवारी ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ माओवादी केन्द्रको अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय समितिको विदेश बिभागस्थित संगठनहरुको पुनर्गठन, कस–कसले पाए जिम्मेवारी ?
दीप संञ्चार जेठ ४, २०७८ गते १७:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अन्तरास्ट्रिय समन्वय समितिको बिस्तारित बैठकले पार्टीको विदेश बिभागस्थित संगठनहरुको पुनर्गठन गरेको छ ।नेकपा माओबादी केन्द्रका स्थायी कमिटि सदस्य जनार्दन शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा संपन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पुनर्गठित नेपाली जनप्रगतिशिल मंचको मध्यपुर्ब क्षेत्रिय संयोजकमा शनि कुमार ओलि कतार र सचिबमा हरि नेपाली युएई रहेका छन ।
यसैगरि एशिया प्याशिफिक क्षेत्रिय संयोजकमा हर्क थापा जापान र सचिबमा रमेश तिवारी मलेशिया रहेका छन भने मलेशियाको अध्यक्षमा प्रेम पान्डे र रुपधन घर्तिमगर सचिबमा चयन भएका छन । अन्य क्षेत्रिय समितिहरुका बारेमा छलफल भईरहेको र छिट्टै गठन हुने अन्तरास्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्ष युबराज चौलागाईले बताए ।
मध्यपुर्व क्षेत्रिय संयोजक भएपछी ओलीले मध्यपुर्बका सम्पुर्ण नेपाली श्रमिकहरुलाई संगठित गर्दै उनीहरुको पक्षमा आवाज उठाउने बताए । जनयुद्दको शुरुवातिदेखी नै पार्टीको लागी लडेका ओली जनयुद्द सकिएपछि कतार प्रवेश गरेका थिए । कतार बसेर पनि ओलीले पार्टीको काम ईमान्दारिताका साथ गर्दै आएका छन । हाल मध्यपुर्बमा लाखौ माओबादीका कार्यकर्ता र समर्थक रहेका छन ।